Ibhobho yokuhlambela iBlack Nickel isasazekile
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW 8 Inch Esasazekileyo Igumbi lokuhlambela iBlack Nickel
Wowow 8 intshi ebanzi kwindawo yokuhlambela ifenitshala eneNickel
ikaliwe 4.95 Kwi-5 esekelwe kuyo 20 amanqaku umthengi
ezimbini zokuphatha igumbi lokuhlambela elinabileyo linokuhlangabezana neemfuno zokutshintsha okutshisayo nokushushu kwamanzi, ukuphucula umhombiso wegumbi lokuhlambela, lolona khetho lufanelekileyo kuwe!
2320300 imiyalelo yokufaka
Isuntsu yegumbi lokuhlambela ligangathe indawo ye-nickel ebanzi 2320300
Ngaba uyazi ukuba itampu yakho yokuhlambela yenye yezona zinto zibaluleke kakhulu kwindawo yakho yokuhlambela ngokwayilwa? Nokuba zincinci, iipompo zinokuba nefuthe elikhulu kwinto yakho yokuhombisa yangasese. Iipompo zegumbi lokuhlambela yindawo ekugxilwe kuyo yendalo nakweyiphi na indawo yoyilo. Oko kuthetha ukuba xa umntu engena kwigumbi lokuhlambela, enye yezinto zokuqala ezitsalelwa kuye, ziimpompo zangasese. Ke ngoko itampu yokuhlambela inokwenza igalelo elibonakalayo nakweyiphi na into yokuyila yangasese kwaye kufuneka ikhethwe ngobulumko.
Oku kubonisa ukuba kufuneka ukhethe ipompo yakho yokuhlambela kakuhle. Unokuba nohlahlo-lwabiwo mali (olubekelwe ikhephu) kwindawo yakho yangasese entsha. Rhoqo siyabona ukuba iifompo zangasese azibandakanywanga kuyilo lokuqala kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Iimpompo zegumbi lokuhlambela zihlala zikhethwa kuphela ekupheleni kwenkqubo, ngelixa igumbi lokuhlambela sele lifakiwe. Kungangumceli mngeni omkhulu ukufumana itompu yokuhlambela ehambelana nokukhetha uyilo kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Uhlahlo-lwabiwo mali lokuhlambela luhlala luphela ekugqibeleni ngenxa yeziganeko ezingalindelekanga, kwaye awufuni kulalanisa kuyilo kunye nomgangatho ukhetha iipompo zakho zangasese. Ngokukodwa xa usazi ukuba ezi mpompo zangasese zinokuba nefuthe elibonakalayo kwinto yakho yokuhombisa yangasese. Kulungile ke ngoko ukwazi ukuba i-WOWOW ikunika iipompo ezintle nezintle zangasese ngamaxabiso afikelelekayo. Ngenxa yoko, i-WOWOW ikubonelela ngexabiso elifanelekileyo lemali.
Isikhuselo sokucoca ngesinyithi esiqinileyo sogutyungelwa kukuphithizela
Igumbi lokuhlambela ngamanzi i-WOWOW's faucet brushed nickel ebanzi yenziwe ngentsimbi eqinileyo. Uya kuyiphawula kwangoko xa ubambe le faucet yokuhlambela esandleni sakho. Igumbi lokuhlambela ngombhobho wokuhlanjwa kwe-nickel lisasazeke kakhulu kwi-3.8 lbs etyhila umgangatho wayo ngaphandle kokuthandabuza. Unokuqiniseka ngombhobho ophezulu wokuhlambela oza kuhlala iminyaka emininzi. Ngokuqinisekileyo, izinto zobhedu eziqinileyo zibhetele kakhulu kunezinye izinyithi. Ngolu hlobo lomxholo wesinyithi omkhulu awunakukhathazeka konke malunga neengxaki zokubola umzekelo. Ngaphandle koko, izinto ezikumgangatho ophezulu zibonelela ngozinzo kunye nobomi obuphezulu bemveliso. Umgangatho wamanzi wakho awuyi kuba nasikhokelo kwaye ke lolona khetho lufanelekileyo kwimpilo yakho.
Ngaphandle koko, itepu yegumbi lokuhlambela i-nickel esasazwayo yagqitywa ngomphezulu we-nickel. Ayisiyiyo kuphela le nto yokugqibezela ukubonelela ngobuhle kuyilo lwakho lokuhlambela, ikwanxiba ukumelana. Ukugqitywa kwe-nickel kuthintela ukufuma kunye nemikrwelo, eyenza itephu yokuhlambela ibhulashi ye-nickel isasazeke- kunye nebala? Ke ngoko kukunethezeka okusemgangathweni ophantsi kwigumbi lakho lokuhlambela, ekulula ukuba ucoceke ngokusula ngelaphu. Ilula njengoko kunjalo!
Isikhuselo sokuhlambela segumbi lokuhlambela esakhiwe banzi
Igumbi lokuhlambela le-WOWOW liglasi enabileyo ye-nickel enendawo ezimbini zokuphatha igumbi lokuhlambela elingene kwiimfuno zakho zokuhlengahlengisa umthamo wamanzi ashushu nabandayo ngokwahlukeneyo. Uyilo olubanzi ke ngoko luyakwazi ukuhlengahlengiswa ukusuka kwi-4 ukuya kwi-16 intshi. Isikhombisi esifunwayo sifuna nje i-3-hole hole kwaye umgama wokufaka unokuhlengahlengiswa kukhetho lwakho kunye neemfuno.
Isikwere esine-high spout ngokuqinisekileyo siyilo olwahlukileyo ongasokuze ulubone kwezinye iifayile zegumbi lokuhlambela ongazifumana emarikeni. Iifenitshala ezininzi zegumbi lokuhlambela zikhangeleka zifana. Ukufumana into ekhethekileyo ngokubhekisele kwilize kunokuba lucelomngeni. Ngaphandle koyilo lwayo olunesibindi, ukuphuma kwethala lokuhlambela eligangathiweyo kubanzi kukunika ukucaca okwaneleyo phantsi kwesihlabo sokunikela intuthuzelo ephezulu. Ke le faucet yekhethekileyo yomgangatho wokulala inikezela zombini inqaku langoku kunye nentuthuzelo ngaxeshanye. Ngokwenyani esebenzayo, akuyi kufuneka ukuba wolule izandla zakho kude ukuze ufike emanzini. Oko kuyenza isebenze kakuhle.
Isikhenkcisi esisebenzayo ngokulula isitayile sokuhlambela sisasazeke ngokubanzi
Iiphatho ezi-2 zeli favelet yokuhlambela ifanelekileyo zikunika ithuba lokulawula ngokuchanekileyo umthamo kunye namaqondo obushushu amanzi. Izibambo ezi-2 zenziwe nge-alloy eqinileyo kwaye zinika ukubamba okulula kodwa okwenziwe kakuhle. Ayisiyiyo kuphela indawo yokuhlambela egcwele indawo ethe tyaba esebenzayo ngaphandle kokusebenza kakuhle, kunye nokuphuma ngokwawo kunika ukufikelela kuma-degrees angama-360. Ke ngoko ungayibeka itafile yokuhlambela egutyungelweyo yindawo ephucukileyo ngendlela ekhululekile kuwe, kwaye ungayijika uyibuyisele ngasemva. Oko kwenza kube lula ukucoca igumbi lakho lokuhlambela umzekelo.
Ngaphandle kokusebenza kwayo ngokulula, isitovu sokuhlambela esinebhloksi esandisiweyo sinokufakelwa ngokulula. Ukuyila kwayo okukhawulezayo kokufaka kuyingqayizivele kwimarike. Oku kwenza ukuba ukwazi ukunamathisela lonke unxibelelwano ngokukhuselekileyo nangokulula ngokwakho. Imigca yamanzi ashushu nabandayo axutywa ngumbhobho wokufaka ngokukhawuleza onokuthi uxhonywe ngaphandle komngxunya. Ngale ndlela echanekileyo uqinisekile ukuba imibhobho yakho yamanzi ayizukugqabhuka. Isikhephe sokuhlambela esine-nickel kubanzi sikhona kulula ukufaka ngaphandle kokusebenzisa ipapa ebizayo.
Isiqinisekiso sokuhlamba igumbi lokuhlambela ligcinwe ngokubanzi
Ibhobho yamanzi yokuhlambela i-nickel isasazeka ngokubanzi iza nazo zonke izinto ezifunekayo, kubandakanywa ikiti yokufaka. Ngaphandle kwesikwere esiphakamileyo kunye neziphatho zayo ezi-2, iphakheji iza nomjelo wamanzi, imibhobho emibini yamanzi engama-2 cm yamanzi abandayo kunye ashushu, i-50 pop up strain stopper kunye neseti epheleleyo yezixhobo kunye nezixhobo.
Njengoko i-WOWOW iqinisekisa ukuba inika elona xabiso liphezulu lemali, itepu yangasese yokuhombisa i-nickel isasazeka ngokubanzi iza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-90. Ukuba ngekhe umangaliswe lixabiso lemali olifumanayo, ungabuyisa ipompo kwigumbi lokuhlambela i-nickel esasazekileyo ngaphandle kwengxaki. Uqinisekisiwe ngembuyekezo epheleleyo ngaphandle kokubuzwa. Ngaphandle koko, i-WOWOW ikubonelela ngesiqinisekiso seminyaka emi-3. Ukuba itepu yakho yokuhlambela i-nickel esasazekileyo ayinakwenza ngokungathi ubuya kulindela ukuba yenze, i-WOWOW iyakutshintsha itephu yakho yokuhlambela entsha kraca. WOWOW iluthathela phezulu uxanduva lwayo kwaye asisokuze sikushiye.
Izibonelelo zefenitshala yokuhlambela igumbi lokuhlambela ligcwele kwindawo engezantsi:
• Uyilo olunohlobo olu-7 olwahlukileyo
Izixhobo zensimbi ezinkulu
• Unyamezelo lobomi bonke
I-SKU: 2320300 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: Izibambo ezi-2, Uqhekeze uNickel
11.2 x 10.1 x 3.2 intshi
Brass / Yenziwe ngentsimbi eshayinayo / iZinki ingxubevange
Amanzi ashushu / abandayo
Ixabiso elikhulu ngexabiso. Iqhekeza leendleko. Ijongeka intle. Isenzo kwizibambo sigudile kwaye siqinile. Qaphela ukuba ispout asinakujika. Khange ndiyiphande ngokuthe ngqo loo nto kwaye ayongxaki, kodwa ezo ndizithathileyo zinento yazo.
Kulula kakhulu ukuyifaka. Lumka nje xa unamathisela umgca wokubonelela ukuze ubambe amathontsi ombane Sebenzisa iiwrenke ezimbini ukuzomeleza kunye. Ngaphandle koko, itephu entle kakhulu. Kufanelekile ukuba uthenge!
Ndaye kuhlahlo-lwabiwo mali olungqongqo kwaye ndagqibela ngokukhetha le mpompo yam yangasese. Ndiyabuthanda ubude kunye noyilo olulula, ibifakelwe phantse inyanga ngoku kwaye isebenza ngokugqibeleleyo. Ndingayicebisa ngamandla!
silungisa indlu yokurenta ukuze siyibeke kwintengiso ukuze siyithengise kwinyanga ezayo. Sathenga into engeloncedo lokuhlambela kwivenkile enkulu yendawo kodwa iipompo zazinexabiso elikhulu. Ndizijongile kwiWOWOW ndaye ndagqiba kweloku. Impompo enkulu ejonge ngakumbi kwixabiso. Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye zonke izinto esasizifuna zazibandakanyiwe.
Le yeyona faucet ilungileyo ngexabiso! Zonke zizinyithi ezine-iron-push-up and down drain with a basin! Akusekho zimbhobho zokucoca umbhobho weenwele!
Enye yezona zinto zithengiweyo ukuza kuthi ga ngoku eziphakamise inkangeleko yokuhlambela. Ukuhanjiswa okukhawulezayo .. ukufakwa ngokulula. Umgangatho ofanayo njengoko uza kuhlawula kabini kwiDepho yasekhaya. Fumana lonke ixabiso lemali yakho. Ndonwabe kakhulu ngokuthenga kwam.
Ndonwabile ukuba ndakhangela kwi-Intanethi ukufumana le faucet. Kukwindlela esezantsi yexabiso kunaleyo uyifumana kwiivenkile ezinkulu zebhokisi yezixhobo, kwaye khange sibingelele kwanto ngokokubonakala kwayo. Intle. Ngaba uya kuthenga kwakhona kule brand.
Ukufakwa ngokulula ngokwenene kunye nomgangatho onesidima kunye nesitayile. Thelekisa nezinye iimpompo zam ezivela eDepho yasekhaya, ngokuqinisekileyo le ifanele ukuyithenga ngomgangatho ophezulu kodwa ixabiso lesiqingatha. Iyacetyiswa kubahlobo bam ngokunjalo
Yithande itephu. Ukufakwa kwakulula kakhulu ngaphandle kokuba kuye kwafuneka sifumane amathumbu amade esinki yethu ethile. Ijongeka ngathi ivakalelwa ubuncinci kabini ixabiso elihlawuliweyo. Itephu yayipakishwe kakuhle eyinkcukacha encinci kodwa yenza yonke into nokuba intle. Enkosi!
Kulula kakhulu ukuyibeka. Kwaye iigloves sele zikhona ebhokisini. Ndithatha iyure enye ukususa okudala: (Kwaye i-15mins ifake entsha, btw andingombumbi. Kushushu okanye kuyabanda bakuphawule ngokucacileyo.Awunakwenza mpazamo, lilonke, lixabiso elifanelekileyo
Umbhobho kunye neziphatho zize kakuhle zisongelwe ukunqanda ukukrwela. Zombini itephu kunye neziphatho zazenziwe ngobhedu ukuze zihlale ixesha elide kwaye imigca yayiyeyentsimbi. Nangona kunjalo, ndiyibuyisile le seti yesiphene esinye esikhulu. Umsele wawumkhulu kwaye wawukhulu kakhulu kumngxunya wokuhambisa amanzi ngokomgangatho ophakathi. Isitshixo sokuhambisa amanzi senziwe ngeplastiki engasindi, hayi ngentsimbi.
Xa umfana wam ejonga onke la malungu okokuqala, wayenomsindo kwaye ethukisa. Kodwa ngelixesha agqiba ngalo ukufaka itompu, wayesele emncomile umntu oyile itompu kwaye ebuza ukuba kutheni zonke izixhobo zokuhlambela bezingalunganga. Ndonwabile ukuba ndikhethe le faucet. Ukongeza kokulula, ndicinga ukuba intle. Olu luhlobo ebendikulifuna.
Siyithengile le mveliso njengendawo yethu endala, kwaye le mveliso iye yahlangabezana nazo zonke izinto ebesizilindele nangaphaya! Sifuna into ekhangeleka intle, kodwa ingena kwizihombiso zethu zasekhaya / umxholo. Ayipheleli nje ekubeni le faucet ibonakale intle, isebenza ngokugudileyo kwaye inendlela emangalisayo yokuhamba kwamanzi. Ndiyifakile le nkqubo ngaphakathi kwimizuzu engama-20 ngaphandle koncedo lomnye umntu. Ndingacebisa ukuba le mveliso kuye nakubani na othengayo kwintengiso yesinki yangoku engafaki mngxunya kwisipaji sabo.
Ndithathe indawo yompompo we-hans ogqithisileyo (upelo) kunye nale yunithi. ifakwe kwimizuzu eyi-15. igudileyo, intshukumo yevalve entle. Uyilo lubalasele kakhulu ekuthinteleni intshukumo yokubamba njl. Ixabiso elikhulu. enye itephu endiyibuyisileyo yayiyi-5x ixabiso leli. Ndingumakhi wekhaya, kwaye ndifake ii-100s zeefompo. Masinwabe!
Isinki yangasese. Umbala kunye nesimbo sikhangeleka sihle kodwa itephu yamanzi ashushu ixinene kakhulu ukuba ingaguquka ngokulula kwaye yenze ingxolo yokutswina. Umbhobho wamanzi ashushu usebenza kakuhle kakhulu. Onke amalungu ebekhona ebhokisini, kwaye zombini zazinendawo zokuwasha ezifanelekileyo kwaye zafakwa kakuhle. Iyunithi yesitokhwe kwisiphatho ngasinye samanzi ashushu nabandayo itywiniwe ngenxa yoko ayinakulungelelaniswa. Sisiphene sokwenza. Ngaphandle koko, amanzi abandayo asebenza kakuhle, kodwa xa uguqula isiphatho samanzi ashushu siqinile kwaye siyancwina emva koko uvumele amanzi ashushu ukuba aphume etephini.
Onjani wona ukonwaba umahluko oboniswe yile mpompo ngamampunge am! Ipakishwe kakuhle, kumnandi ukuba nendibano epheleleyo ibandakanyiwe, ikwafumene isixhobo sokuhambisa isepha kunye nelaphu lokucoca. Isixhobo sibonelelwe ukuseta izigqubuthelo zesiseko sezibambo, ngokunjalo, kulungile ukuba uphakamise amaqweqwe xa usenza ucoceko olucokisekileyo lwenkunkuma eqokelelweyo (akukho brashi yamazinyo). Ixabiso elihle kakhulu! Yenziwe kakuhle! Ngokuqinisekileyo ndiza kubuya ndize kuthenga kwikamva!
into yayibonakala intle kakhulu. Ingxaki kuphela yayikukuba enye yeepompo yayingenziwa kakuhle kwaye yayigaya qho xa uyijika okanye uyicima. Kwafuneka ndenze uhlengahlengiso ukulungisa ingxaki. kwakhona idreyini popu ayiveli ngokwaneleyo ukuvumela amanzi ukuba aphume ngokukhawuleza ngokwaneleyo.
Intambo entle kakhulu ejongeka ngathi ilungile. Sayithanda kakhulu kangangokuba sa-odola ezimbini ngaphezulu kwigumbi lokuhlambela eliyinkosi.
Sinovuyo ngenkangeleko kunye nesantya esikufumene ngayo oku. Ukufakwa kwakunzima kodwa kodwa isisombululo esinexabiso eliphantsi nesikhangeleka silungile ekuhlaziyweni kwethu kwigumbi lokuhlambela.
Imveliso enkulu! Kulula kakhulu ukuyifaka kwaye isitayile sihamba ngokuhlamba kwethu iindwendwe ngokugqibeleleyo. Isitayile ngakumbi kunayo nayiphi na into esiyifumeneyo kwiivenkile zehardware zasekhaya kwaye amaxabiso ayoyikeka!